alldayniie.com » 50 ardey oo Soomaali ah oo Master Degree ka qalinjebisay (Daawo sawirro)
50 ardey oo Soomaali ah oo Master Degree ka qalinjebisay (Daawo sawirro)
Muqdisho (Caasimadda Online) – Munaasabad Qalin jebin Master Degree ah oo ay ka qeyb galeen Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, Ganacsato iyo Culumaa’uddiin ayaa lagu qabtay Magaalada Muqdisho.
50 ardey ayaa dhameysatay Master Degree Qeybaha kala ah International Business iyo Master of Finance.
Barnaamijkan Master Degree-ga ah waxaa iska kaashaday Jaamacadda Pan-African International University iyo Jaamacadda Amity ee Waddanka India.
Guddoomiyaha Jaamacadda Pan African International ahna Wakiilka Soomaaliya ee Jaamacadda Amity Isxaaq Axmed Muuse ayaa sheegay in Barnaamijkaan uu yahay Miraha ka dhashay Dadaal xooggan oo ay u galeen sidii ay ardeyda soomaaliyeed waddankooda uga heli lahaayeen Tacliinta Sare.
Ardeydan Maanta Qalinjebisay ayaa waxbarashada ku qaadanayay si Online ah ayadoo Imtixaannadana looga qaadayay Gudaha Dalka.
Waxay waxbarashada soo Billaabeen Sanadkii 2014kii ayadoo ugu dambeyna ay Maanta Guddoomeen Shahaaddooyinkooda.
The post 50 ardey oo Soomaali ah oo Master Degree ka qalinjebisay (Daawo sawirro) appeared first on Caasimada Online.